Iingenelo zokuHuleka kweNdleko, ukuThengisa i-DaWei Induction Equipment Equipment
zeziphi iingenelo zokufudumala ukunyusa, ukugquma, ukuqina, ukuyibilika kunye nokwakha, njl.
Kutheni ukhetha ukufudumala ukutshisa ngaphezu komlilo ovulekileyo, i-convection, ekhanyayo okanye enye indlela yokufudumala? Nantsi isishwankathelo esifutshane seenzuzo eziphambili zolu xwebhu oluzinzileyo lokushushumbisa izibonelelo zokushushumbisa ukuvelisa okumandla:
Ukutshisa ukutshisa inyanzeliswa ngaphakathi kwenxalenye ngokwahlukeneyo ngokutshintsha kombane. Ngenxa yoko, imveliso yemfazwe, ukugqwetha kunye nokwala amaxabiso kuncitshisiwe. Ngowona mgangatho uphezulu wemveliso, eli candelo linokubekwa bucala kwigumbi elivalelweyo elinomshini wokungena ngaphakathi, inert okanye ukunciphisa umoya wokuphelisa ifuthe le-oxidation. Amaxabiso emveliso anokuphakanyiswa ngenxa yokuba induction isebenza ngokukhawuleza okukhulu; ubushushu buphuhliswa ngokuthe ngqo nangoko (> 2000º F. kwi <1 yesibini) ngaphakathi kwesahlulo. Ukuqalisa phantse kwangoko; akukho shushu shushu okanye umjikelo opholileyo ofunekayo. Inkqubo yokufudumeza induction inokugqitywa kumgangatho wokuvelisa, ecaleni komatshini obandayo okanye oshushu, endaweni yokuthumela iibhetshi zezinto kwindawo ekude yeziko okanye kwikontraki esezantsi. Umzekelo, inkqubo yobhedu okanye yokuthengisa ngetsimbi ebikade ifuna ixesha, indlela yokufudumeza ibhetshi ye-off-line ngoku inokuthi ithathelwe indawo yinkqubo eqhubekayo yokuhamba kokuhamba kwamanzi.
* Ukutshaya okuhambisanayo
Ukufudumala ukufudumala kususa ukungahambelani kunye nemiba esemgangathweni
kunye nomlilo ovulekile, ukufudumeza ityhulo nezinye iindlela. Emva kokuba inkqubo ilandelwe kakuhle kwaye isetyenziswe, akukho msebenzi wokuqagela okanye uguquko; iphethini yokufudumala iphindaphinda kwaye ihambelana. Namaxesha anesimo esomeleleyo karhulumente, ukulawula okushisa ngokuchanekileyo kunika iziphumo ezifanayo; amandla angakhishwa ngokukhawuleza okanye avaliwe. Ngolawulo lokuvalwa kwelophu lokuvala, uphambili zokushushumbisa iinkqubo banako ukulinganisa ubushushu benxalenye nganye. Ukunyuka ngokuthe ngcembe, ukubamba kunye nokunciphisa amaxabiso kunokusekwa kwaye idatha inokurekhodwa kwicandelo ngalinye eliqhutywa.
* Ukucoca Ukucoceka
Iinkqubo zokufudumala ayitshisi i-fuel fossil; Ukuqulunqwa yinkqubo ecocekileyo, engeyiyo ingcolileyo eya kunceda ukukhusela imo. Inkqubo yokucwangcisa iphucula imeko yokusebenza yabasebenzi bakho ngokuphelisa umsi, ukushisa kweentshaba, ukukhutshwa komsindo kunye nesandi esikhulu. Ukufudumala kuphephile kwaye kuyaphumelela ngaphandle kwelangatye evulekileyo yokufaka umngcipheko kumsebenzisi okanye ukungafihli inkqubo. Izinto zokungenzi izinto ezichaphazelekayo azichaphazeleka kwaye zingafumaneka kufuphi nommandla wokufudumala ngaphandle komonakalo.
Ukukhathala kwindleko zonyusa ezisebenzayo? Le nkqubo yodwa yomeleleko yamandla iguqulela kwi-90% yamandla asetyenzisiweyo amandla okushisa; Iifutha zebhetti ngokuqhelekileyo zi-45% kuphela ezisebenza ngamandla. Kwaye ekubeni ukutyunjwa akufuneki umjikelezo ofudumeleyo okanye opholileyo, ukuma kweentlawulo zokushisa kukunciphisa ubuncinane. Ukuphindaphinda nokuhambelana kwenkqubo yokuqulunqa kwenza ukuba ihambelane kakhulu neenkqubo ezizenzekelayo zisebenza ngamandla.
iingenelo zokufudumala ukunyusa